लकडाउन: घर बस्दा-बस्दा दिक्क लाग्यो, समय बिताउन बगैंचा खन्दा हात लाग्यो ‘खजाना’ ! – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/लकडाउन: घर बस्दा-बस्दा दिक्क लाग्यो, समय बिताउन बगैंचा खन्दा हात लाग्यो ‘खजाना’ !
लकडाउन: घर बस्दा-बस्दा दिक्क लाग्यो, समय बिताउन बगैंचा खन्दा हात लाग्यो ‘खजाना’ !
चीन हुँदै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण अहिले पूरै विश्व आक्रान्त छ। विश्वका अधिकांश देशहरु अहिले लकडाउनको अवस्थामा छन्। कोरोना संक्रमण फैलिन नदिने उपयुक्त तरिका मानिएको लकडाउन धेरै देशमा लागू गरिएको छ। जसकारण अहिले मानिसहरु घरमै समय बिताइरहेका छन्।
लकडाउनमा समय बिताउन मानिसहरु केहि न केहि गरिरहेका छन्। लकडाउनको यस समयलाई धेरैले केहि नयाँ सिक्ने र केहि नयाँ उपलब्धि हाँसिल गर्ने अवसरको रुपमा लिएका छन्।
यसैबीच बेलायतका एक व्यक्तिको लागि लकडाउन एकदम यादगार बन्न पुगेको छ। लकडाउनकै कारण उनले आफ्नो बगैंचामा दुर्लभ चीज फेला पारेका छन्।
खासमा, बेलायतको पश्चिम योर्कशायरका एक व्यक्तिले लकडाउनका बेला आफ्नो बगैंचामा धेरै पूरानो कार फेला पारेका हुन्। समय बिताउन घर पछाडी रहेको बगैंचा खन्दा उनले ७० वर्ष पूरानो फोर्ड कार फेला पारेको बताइएको छ।
बताइएअनुसार, ४० वर्षीय जोन ब्रेसाले सन् १९५० दशकमा अत्याधिक प्रचलनमा रहेको कारण आफ्नो बगैंचामा पुरिएको अवस्थामा फेला पारेका हुन्। खन्ने क्रममा कारका विभिन्न टुक्राहरु फेला परेको र नम्बर प्लेट समेत फेला परेको उनको भनाई छ। क्षतिग्रस्त रुपमा रहेको कार भएपनि आफ्नो लागि त्यो एक खजाना सरह भएको उनी बताउँछन्।
यस कारलाई मर्मत गरेर तयार गरी सजाएर राख्ने उनको योजना छ। यसलाई ‘एन्टिक वस्तु’ को रूपमा घरमा सजाएर राख्ने बताउँदै उनी यसलाई लकडाउनबाट पाएको एक बहुमुल्य उपहारको रुपमा वर्णन गर्छन्।
म्याग्दीमा गाई काटेको आरोपमा चार जना पक्राउ
कुखुराको ‘फाइटर’ भालेको आक्रमणबाट प्रहरी प्रमुखको मृत्यु !